महा’मारीकै समयमा नेताहरुलाई राष्ट्रपतिको भोज,,हेर्नुहोस! तपाईं के भन्नुहुन्छ?ताली या गाली? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
महा’मारीकै समयमा नेताहरुलाई राष्ट्रपतिको भोज,,हेर्नुहोस! तपाईं के भन्नुहुन्छ?ताली या गाली?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक आज सुरु हुँदैछ । प्र’धानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ११ बजेका लागि तय भएको बैठकमा आन्तरिक विवादका विभिन्न विषयमा छ’लफल हुनेछ ।
नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको वि’वाद अन्त्यका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियतालाई अर्थपूर्णरुपमा लिइएको छ । यसअघिको स्थायी कमिटी बैठकमा दिवा भोज दिएकी राष्ट्रपतिले यस पटक रा’त्रिभोज दिन लागेको नेकपाका एक स’चिवालय सदस्यले ब’ताएका छन् ।
बेलुकी पाँच बजे रा’ष्ट्रपति निवासमा आयोजित भोजमा विभिन्न दलका नेतालाई बो’लाइएको छ । तर, नेकपा अधिकांस नेताहरुलाई नि”मन्त्रणा पुगेको छ । नेकपाका नेता’हरुलाई मात्र भो’ज दिँदा आलोचना हुने भएकाले राष्ट्रपतिले विभिन्न दलका नेतालाई भ’नेर भोजको आयोजना गरेको नि’मन्त्रण प्राप्त गरेका एक नेताले जानकारी दिए ।
केहीदिन अघि नेकपा अ’ध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई छुट्टाछुट्टै भेटेकी राष्ट्रपति भण्डारीले सचिवालयका अन्य ने’ताहरुसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेकी छन् । उनको स’क्रियतालाई नेकपाका नेताहरुले ओली पक्षलाई बलियो बनाउने रणनीतिमा लिने गरे’का छन् ।
एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘राष्ट्रपति देशकै अभिभावक बन्नुपर्नेमा पा’र्टीको पनि बन्न सक्नु भएन । महामारीको समयमा रात्रि भोज आयोजना गर्नु हु’न्थेन । उहाँले आफ्नो मात्रै नेता बोलाएको भनेर आलोचना हुने डरले स’र्वदलीय भनेर निन्त्रणा गर्नु भएको छ । गुट बलियो बनाउन महामारीको समयमा भो’ज आयोजना गरिएको छ ।’
रात्रिभोजमा उपराष्ट्रपति न’न्दबहादुर पुन ‘पासाङ’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, वि’भिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, नेकपाका स्थायी कमिटीसम्मका केही नेतालगायतलाई नि’मन्त्रणा गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका व’रिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूलाई भोजमा बोलाइए पनि जाने वा नजाने निर्णयमा नपुगेको बताएका छन् । उनले नागरिकख’बरसँग भने, ‘भोज आयो’जना गरिएको भन्दै नि’मन्त्रणा गरिएको छ । म सल्लाह गर्दैछु यस्तो अवस्थामा जाने वा नजाने भन्ने । मेरो जाने वा नजाने भन्ने टुंगो लागे’को छै’न ।’
यसअघिको स्थायी क’मिटी बै’ठकको समयमा पनि भण्डारीले नेकपा नेताहरुलाई दिवा भो’ज दिएर पार्टीको वैचारिक तथा गुटगत व्यवहारमा परिवर्तन ल्या’उने प्रयास गरेकी थिइन ।नागरिक खबरबाट
Previous को’रोना उपचारमा खटिएका डाक्टरको हात देखेर भा’वुक बने मानिसहरु! सलाम छ ।
Next MCC पारित भईसक्नु पर्ने मिति भन्दा २ दिन पर सम्म संसदको बैठक नै स्थगित गरिदिए सभामुखले,,हेर्नुहोस!